Ergada Doorashada oo ay suurtagal tahay la dhimo (Ogow Sababta) - Ceelhuur Online
Home > Wararka Maanta > Ergada Doorashada oo ay suurtagal tahay la dhimo (Ogow Sababta)
August 27, 2016 admin2692 Comments on Ergada Doorashada oo ay suurtagal tahay la dhimo (Ogow Sababta)
Shirar xiriir ahaa oo Madaxda dowladda iyo xubno ka tirsan Beesha Caalamka iyo Hey’adaha deeq bixiyeyaasha ku yeesheen magaalada Muqdisho ayaa looga hadlay dhaqaalaha ku baxaya doorashooyinka.
Arrimaha la isku haayo ayaa waxaa ka mid ah qaabka loo maamulayo dhaqaalaha ku baxaya doorashooyinka, iyadoo xubnaha Beesha Caalamka ay dalbanayaan in la cadeeyo dhaqaalaha ku baxaya hanaanka doorashooyinka dadban.
Sidoo kale waxaa ay dood ka taan tahay xareynta ergada 14025 iyo dhaqaalaha ku baxaya, waxaa la isku hayaa cida bixineysa dhaqaalaha intaas la eg ee ku baxeysa xareynta ergooyinka.
Madaxweynaha iyo Ra’iisul Wasaaraha ayaa maalmo ka hor la kulma Madaxa UNDP Helen Clark oo booqasho ku timid magaalada Muqdisho, iyagoo ka wada hadlay arrimaha doorashooyinka iyo dhaqaalaha ku baxaya.
Ergeyga Qaramada Midoobey u qaabilsan Soomaaliya Danjire Keatin ayaa sidoo kale la kulmay Madaxda dowladda iyo Guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal, kuwaasoo uu kala hadlay qorshayaasha doorashooyinka iyo dhaqaalaha ku baxaya.
Shirkii Madasha ee ugu dambeeyay ayay xubnaha Beesha Caalamka ku soo bandhigeen in maamul goboleedyada iyo dowladda Federaalka ay bixiyaan qeyb ka mid ah dhaqaalaha ku baxaya doorashooyinka, taasoo ay diideen xubnaha dowlad goboleedyada.
Tagged beesha caalamaka doorashada 2016 doorasho ergada ergo madasha Musharax
Sawirro: Dhismaha Dekadda Hobyo oo laga Shiray
Madaxweyne Farmaajo oo Maanta Furaya Kalfadhiga Aqalka Sare
July 12, 2017 Saadaq Laki
2 thoughts on “Ergada Doorashada oo ay suurtagal tahay la dhimo (Ogow Sababta)”
Cida Fardaha Wiilkoda says:
Cida Fardaha Wiilkoda liked this on Facebook.